Qadar Oo Ka Niyad Jabsan Sida Mareykanka Uga Aamusanyahay Dalabkeedii Beeca Diyaaraha | Xaqiiqonews
Sida ay daabacday majaladda “Wall Street Journal” ee Ameerikaanka ah dowladda yar ee gacan carbeed dhacda Qadar ayaa ka walaacsan jawaab la’aanta Mareykanka ee ku aadanaa dalabkooda ahaa iibsahada diyaaradaha darooniska Mareykanka.
XAQIIQONEWS- WARARKA DIBADDA
Wargeyska ayaa xusay in Qadar ay Mareykanka ku gacan siisay ajandayaashiisa bariga dhexe hadii ay noqon laheyd daadgureynta kumanaankii qof ee Afghanistaan, sidoo kale Qadar ayaa taageertay ajnadaha la dagalaanka waxa loogu yeero argagaxisada, sidaas oo ay tahay dowladda Qadar ayaa ka niyad jabsan sida maamulka Biden uu uga gaabiyey fulinta codsigooda ku saabsanaa beeca diyaaraha dorooniska casriga ah.
Sida uu Wargeyska Xusay Qadar ayaa sanad ka hor dalbtay 4 ka mid ah darooniska hubka culus xambaara ee MQ-9B Predator, Hase ahaatee wasaaradda arimaha dibadda Mareykanka wax jawaab ah kama bixinin codsigaaas
Qadar ayaa sababta ay diyaaradahaas casriga ah udooneyso ku sharxday baahi-sida ay sheegeen- ay u qabaan kormeerka goobaha lagu keydiyo gaaska dabiiciga ah si looga hortago dhaqdhaqaaqyada argagixiso.
Sida uu qoray Wall Street, heshiiska cusub ayaa ku kacay qiimo dhan 600 Milyan oo doolarka Mareykanka ah.
Qadar oo sanadka soo socda ee 2022 lafilaayo in ay martigeliso goobka adduunka ayaa sida ay aaminsan yihiin khubarada amniga waxa ay walwal ka qabtaa falal argigixiso, taasi oo dowladdani yar ku qasbeysa in ay qaadato tallaabooyin dheeri ah oo lagu xoojinaayo amniga.